Dowladda Kenya oo hakisay duulimaadyadii dalka Talyaaniga - Awdinle Online
Dowladda Kenya oo hakisay duulimaadyadii dalka Talyaaniga
March 4, 2020 (Awdinle Online) –Dowladda Kenya ayaa hakisay duulimaadyada tooska ah ee dalkaas uga yimaada dalka Talyaaniga cabsi laga qabo Cudurka dhibaatooyinka faraha badan ku haaya Caalamka ee Coronavirus.
War kasoo baxay Wasiirka Wasaradda Caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe ayaa lagu shaaciyey in Kenya hakisay duulimaadyadii uga imaan jiray Talyaaniga gaar ahaan kuwii tooska ahaa ee Talyaaniga ilaa iyo Nairobi.
Warka Wasiirka ayaa waxaa lagu sheegay in Arrintan ay timid kaddib wada tashi ay dowladdu la yeelatay safaaradda Talyaaniga uu ku leeyahay Nairobi maadaama Talyaaniga uu kamid noqdey dalalka laga helay Cudurka Coronavirus.
Magaalooyin badan oo kamid ah gaar ahaan kuwa ku yaalla dhinaca Xeebta oo kala ah Kilifi, Malindi iyo Watamu ayaa waxaa inta badan howlo dalxiis u yimaada dad dhalasho ahaan ka soo jeedo Talyaaniga,waxaana warkaan kasoo baxay Dowladda Kenya uu ku yeelan doonaa saameyn ballaaran.
Si kastaba Dowladda Kenya ayaa horay u shaacisey in la xadiday duulimaadyadii uga imaan jiray dalalka wadamada Italy, Kuuriyada Koonfureed iyo Iiraan,iyada oo la bilaabay in la karantiilo dadka ka imaanaya dalalkaas muddo 14 cisho ah.
Previous articleDhuusamareeb oo gaarey Wafdi ka socda Dowladda Soomaaliya
Next articleC/raxmaan C/Shakuur “Ciidamada Haramcad & Gorgor waxaa loo isticmaalay 4 faa iido siyaasadeed oo sababay dagaal”